Nepal Trending, Author at NepalTrending - Page 132 of 132
Author: Nepal Trending
नायक प्रदीप खड्का अभिनित चलचित्र ‘प्रकाश’को छायांकन सकियो !
Nepal Trending — April 28, 2021 add comment
काठमाडौं : चलचित्र ‘प्रकाश’को छायांकन सकिएको छ । जुम्लालगायत ठाउँमा गरिएको छायांकन सकेर सुटिङ युनिट काठमाडौं फर्किने क्रममा रहेको छ ।“४२ दिन लगाएर चलचित्रको छायांकन सकियो । अहिले हामी काठमाडौं फर्किने क्रममा...	Read more »
उपत्यका छाड्नेहरू भन्छन्, ‘घर पुगे कम्तिमा दुई छाक खान त पाउँछौं’
काठमाडौं : मध्य बैशाखको चर्को घाम । पिठ्यूँमा भारी झोला छ । असिनपसिन अनुहार लिएर गाडी कुरिरहेका थिए उपेन्द्र कुँवर । सरकारले कोरोना संक्रमण निरन्तर उकालो लागिरहेका कारण बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने...	Read more »
निषेधाज्ञामा सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका सबै गतिविधि बन्द हुने !
काठमाडौं : नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निषेधाज्ञा अवधिभर आफ्ना सबै गतिविधि बन्द हुने जनाएको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै महासंघले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी...	Read more »
« Previous 1 … 131 132